Shotcrete Machine, ny fandalorana Machine, Concrete Pump - Keming
Service foto-kevitra: manompoa mpanjifa sy manome fahafaham-po ny mpanjifa
Raha ny mahazatra dia ny mpiantoka dia efa nanome ny harona ny Gypsum sokay izay ho ilaina, ary koa famatsiana ivelany misy ny rano raha toa ny trano tsy mbola mifandray.
Sombin-javatra simenitra, izay antsoina koa hoe aircrete, foamed simenitra, foamcrete, finday maivana simenitra na mihena hakitroky simenitra, dia faritana ho toy ny simenitra slurry monina, miaraka amin'ny farafahakeliny ny 20% (isaky ny boky) entrained sombin-javatra any an-plastika rihitra.
Enterprise fanahy: fanoloran-tena, andraikitra, zava-baovao, fahatsarany
Naorina tamin'ny 1979
Henan Coal Science Research Institute Keming Mechanical sy elektrika Equipment Co., Ltd. specializes amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny famokarana sy ny varotra ny tifitra sy ny vokatra sy ny harena ankibon'ny tany pumping vokatra. Io no voalohany fikambanana mba hampivelarana sy tifitra mamokatra milina any Shina ary ankehitriny dia ny faneva ho an'ny fampandrosoana ny tifitra orinasa ao Shina. tarika. Amin'izao fotoana izao, efa nivoatra sy namokatra karazan-Keming marika fitrandrahana (injeniera) mando sy lena andian fanafody vokatra, extrusion paompy, grouting paompy sy ny paompy, ary mihoatra ny 50 karazany.
Enterprise fahitana: hitarika ny milina orinasa orinasa mpamokatra entana, ho niavaka lisitra orinasa
KBT Concrete fampifangaroana Pump
KH76 Hose paompy
KLW180 ny fandalorana Machine
KLW120 ny fandalorana Machine
Ny mpanjifa tsy tapaka
Henan Coal Science Research Institute Keming Mechanical sy elektrika Equipment Co., Ltd.?
Ho izahay hanampy anao hahazo miverina any work.Fast sy resaka hatsarana.
Mandehana any amin'ny mba pejy